Weriye kale oo caan ah oo ka tegaya Laanta Af-Somaliga ee BBC-da [Shaqaalihii London oo la fasaxay.] | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Weriye kale oo caan ah oo ka tegaya Laanta Af-Somaliga ee BBC-da [Shaqaalihii London oo la fasaxay.]
Weriyihii labaad oo ruugcaddaa ah ayaa ka tegaya idaacadda BBC-da Laanteeda Af-Soomaaliga oo shaqadeeda oo dhan loo soo wareejinayo xarunteeda cusub ee magaalada Nairobi, dalka Kenya.
Axmed Cabdinuur oo BBC-da ku soo biiray June, 1996 ayaa markii hore noqday weriyaha Laanta Afka Soomaaliga u jooga magaalada Muqdisho. Waxaana markii danbe uu wareegay magaalada London, isagoo ka mid ahaa weriyeyaashii ugu caansanaa ee muddooyinkii danbe soo mara BBC-da.
BBC-da ayaa fasaxday shaqaalihii fadhigoodu ahaa magaalada London marka laga reebo kuwa ka howlgala TV-ga, waxayna shaqaalaha la fasaxay yihiin weriyeyaashii ugu khibradda badnaa, waxaana howsha la wareeegaya dhalinyaro ka howlgaleysa magaalada Nairobi oo BBC-du ay ka furatay xarun weyn, iyadoo BBC-da ay maalgeliso dowladda UK.
”Waqti adag ayay ahayd, waayo magaaladu waxay u qaybsanayd woqooyi iyo koonfur ay kala xukumayeen hoggaamiye-kooxeedyo aad isaga soo horjeeday. Dalkana sharci iyo kala dambayn kama jirin waqtigaas, BBC-duna waxay ahayd isha keliya ee laga heli karo warar Soomaaliyeed oo sax ah”. ayuu BBC-da u sheegay Weriye Axmed Cabdi Nuur.
Weriye Axmed C/nuur ayaa sanadkii 2000 u wareegay magaalada London, kadib markii uu kasoo shaqeeyay xafiisyada BBC-da ee Muqdisho iyo Nairobi, wuxuuna sheegay in London ay shaqaale yari ba’an ka jirtay xilligaasi.
Axmed Cabdinur ayaa BBC-da Laanteeda Afsoomaaliga la shaqeynayey ku dhowaad muddo 25-sano ah, waxaana isla shalay la shaaciyey inuu shaqada BBC-da ka tegay weriyaha kale ee caanka ah C/Nuur Sheekh Maxamed Isxaaq.
Ma cadda in BBC-da ay heli doonto weriyeyaal u dhigma khabiiradda saxaafadeed ee shaqada laga fasaxay, iyadoo dhalinyaro badan laga shaqaaleysiiyay xafiiska Nairobi.
Previous articleAlshabab oo sheegatay inay duqeyn ku dishay Ciidamo Mareykan ah oo ku sugnaa Saldhigga Ballidoogle
Next articleMadaxweynaha Puntland oo Golihiisa Wasiirada hor geeyay Baarlamaanka Puntland [Sawirro]